mardi, 05 juillet 2022 13:44
Masoivohon’i Madagasikara any Parisy : Mampiantrano fihaonam-be iraisam-pirenena ho an’ny lavanila malagasy
Notanterahina ny 4 Jolay 2022 tao amin’ny trano fiasan’ny Masoivohon’i Madagasikara any Parisy ny fihaonana amin’ireo mpividy sy mpanafatra ary indostrialy mpanjifa ny lavanila malagasy, avy any Eoropa sy Etazonia, ary faritra samihafa maneran-tany.
jeudi, 30 juin 2022 12:47
Ninie Donia : Migadra 6 volana an-tranomaizina
Nohelohin'ny Fitsarana enim-bolana an-tranomaizona, sazy mihatra i Ninie Donia sy ireo 13 hafa namany, araka ny didy nivoaka androany tao amin'ny Fitsarana ambaratonga voalohany Nosy Be.
mercredi, 29 juin 2022 15:47
Fanelezana vaovao tsy marina : Amin'ny 19 jolay ny didim-pitsarana mikasika ireo mpanolotsaina monisipaly 7 mianadahy nisy nitory
Notsaraina ny talata 28 jona 2022 ny raharaha nitorian'ny mpanolotsaina monisipaly Lalatiana Ravololomanana sy Balita an'ireo mpanolontsaina monisipaly namany. Mpanolotsaina sivy no niatrika ny mpitsara, ka ny fito toriana, roa mpitory.
lundi, 20 juin 2022 07:47
Vahombëy : Nodimandry teo amin’ny faha-63 taonany
Rabearisoa Roland Dieu Donné ny anarany fa Vahombëy no nahafantaran'ny maro azy teo amin’ny tontolon’ny zavakanto.
mardi, 14 juin 2022 09:17
YALI Mandela Washington Fellowship : Tanora Malagasy mpitarika 11 mandray fiofanana any Etazonia
Tanora Malagasy miisa 11, eo anelanelan’ny 25 sy 35 taona, no mandray anjara amin’ny fiofanana Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders ho an’ny taona 2022.
dimanche, 29 mai 2022 13:20
Abel Anicet : Hijanona tsy mpilalaon'ny Barea intsony
Nanao fanambarana tamin’ny alalan’ny horonantsary i Abel Anicet nilaza fa hitsahatra tsy ho mpilalao amin'ny ekipam-pirenena amin'ny baolina kitra na Barea an'i Madagasikara.
mercredi, 25 mai 2022 14:03
PAC : Miakatra fitsarana ny raharaha Mbola Rajaonah
Efa nanomboka omaly talata 24 mey 2022 no niakatra eny amin'ny fitsarana miady amin'ny kolikoly, ny raharaha Mbola Rajaonah.